BEET BORO F1: SHARAXAAD, TAARIIKHDA NOOCYADA, HABABKA CODSIGA IYO TILMAAMAHA FAAHFAAHSAN EE KORITAANKA IYO KAYDINTA NOOCYADA KALA DUWAN - BEER CAGAARAN
Laga soo bilaabo Holland oo ku taal dalka Ruushka: xididdo Boro
Beet (lafaha) ayaa koray meel kasta oo ka mid ah waddankeena, xitaa waqooyiga fog, sababtoo ah waa dal aan qabin, sidoo kale waa qudaar iyo faa'iido nafaqo leh. Breeders ayaa helay tiro badan oo kala duwan iyo Beelaha of dabocase cas, kuwaas oo ay yihiin Beelo F1 hybrid. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa waxa uu yahay F1 hybrid waa iyo sida loo heley, sida ay uga duwan tahay noocyo kale, maxay yihiin falsafad iyo qadarin, sida loo si fiican u koro, loo qaado, dukaanka, iyo cudurada iyo cayayaanka u cabsi gelin kara dhammaantoodna la qabsasho.
Astaamo faahfaahsan iyo sharraxaad kala duwan
Tani waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah ee dabocase casaan leh xilli sii kordhaysa ee 110-115 maalmood. Rosset ee caleemaha waa yar yahay, kacsan, si fiican loo horumariyo. Dalagyada Root ee foomka wareega leh dhexroor ee 8-10 cm, waxay gaari karaan miisaanka 110-210 grams. Hilibka dabocase waa midab casaan ah oo aan lahayn daldaloolo, maqaarku waa madow iyo siman. Isugeynta celceliska ee noocyada kala duwan waa 60-80 ton halkii hektar.
Boro F1 oo laga helay Holland. Tani waa isku-dhafan cusub, oo ka sarreeya sifooyinka loogu talagalay ubucda Pablo F1 beerta oo yaqaan kuwa bannaanka u badan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya noocyada kale ee buriak?
Boro F1 dabocase waa mid u adkaysata isbedelka heerkulka iyo cudurada. Dalagyada rootiga ee tayo sarreeya oo heer sare ah, oo leh heer sare oo sonkor ah.
Hybrid Boro F1 si fiican loo hayo, ku habboon nadiifinta farsamada.
Root "Boro" macaan, casiir leh, waxay leeyihiin khafiif khafiif ah, si fiican loo nadiifiyey cayriin iyo la kariyey.
Midabka maroon ee khudradda ayaa sii socota ka dib karinta.
Caawimaad! Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah hadhuudh yar oo hilib khudradeed leh.
Maxay tahay iyo meesha loo isticmaalo?
Hybrid Boro F1 waxaa lagu talinayaa isticmaalka cusub, guriga iyo warshadaha warshadaha, kaydinta xilliga qaboobaha, iyo sidoo kale ku haboonaanta soo saarista cuntada.
Tallaabada Tallaabada Koritaanka Tilmaamaha
Qiimaha baco ee Borot F1 oo miisaankiisu dhan yahay 1.0 gram oo ka mid ah celceliska suuqyada 30-40 rubaar, waxaad ka iibsan kartaa dukaamada Moscow Lawn Zone, First Seeds, Yield Garden iyo kuwo kale, iyo dukaamada St. Petersburg Manor, Praktik Garden, Live Lawn iyo kuwa kale.
Beerista dhulka oo furan waxaa lagu fuliyaa badhtamaha May. Kala duwan ee kala duwan ee xididdo la beeray karaa ka hor jiilaalka - dabayaaqadii October - horraantii November.
Marka aad dooranayso goob loogu talagalay beebistaha, dhowr arrimood ayaa la tixgeliyaa. Qulqulka ku yaalla dhulka hoose ee daadadka ah inta lagu jiro xilliga roobabka culus kuma haboona dalagga. Waa inay noqotaa meel bannaan oo iftiin leh. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa dalagyada la koray ee qorshaha qorshaysan ee la soo dhaafay.
Waxaa fiican in aan ku beeri dabocase ka dib markii uu kaabajka, laakiin ka dib baradho, qajaarka, zucchini, bocorka iyo cagaarka noqon doonaa midho wanaagsan. "Dhiirrigeliyo" xididdo, haddii ka hor intaa le'eg goobta goobta laga dhaliyey dabacasaha, digir iyo basasha.
Wixii "Degmo" waxay u egtahay ciidda dabacsan oo dabiici ah oo leh astaan ​​caadi ah:
dhoobo boodh ah;
Haddii ciidda ay tahay mid aad u caan ah, ciid ayaa ku caawin doonta, haddii kale xididdadu waxay ku koraan qallafsan, adag iyo qadhaadh.
Caawimaad! Kacaawinta tirada badan ee colon, sorrel duurjoogta ah iyo farshaxu waxay muujinaysaa aashitada ciidda. Kobcin on xididada dabocase sida noocan oo kale noqon doonaa qaab yar iyo fool xun. Ku darida lime iyo burka dolomite ee ciidda ayaa yareyn doona suntooda.
Seeds waxaa lagu aasay dhulka oo qoto dheer ah 2-4 cm fogaan ah 5 ilaa 10 cm midba midka kale, ballaadhka u dhexeeya saf ah waa 25-30 cm.
Waxaa fiican in masaafada u dhexaysa dhirta aysan ahayn mid aad u ballaaran., haddii kale xididdadu waxay noqon doonaan kuwo ballaaran, kuwaas oo la kariyey waqti dheer.
Si fiican u samee hawada daruuro leh, ama fiidkii. Ka dib beeridda beerta waxaa lagula talinayaa in la yareeyo wax yar.
Si loo badbaadiyo goobta beerta, beertii beerto waxa badanaa loo isticmaalaa inta u dhaxaysa safarka qajaarka ama yaanyada.
Xilliga cimilada qoyan, cawska loo diyaariyey waa qiyaastii saacad ama laba ka hor intaadan beerin; cimilada roobka, waxay ku habboon tahay qoyaannada qulqulka kaliya. 3-4 maalmood ka dib markii beero waxay ka fiican tahay in la dabciyo ciidda leh qaadin, waxay siin doonaa caleemo saaxiibtinimo.
Horeba heerkulka hawada ee 3-4 ° C, abuurka dabocase doonaa Gagaab, laakiin bil gudaheed.
At cayayaanka 6-7 ° C waxay u muuqdaan 10-15 maalmood.
Marka heerkulku uu xasilan yahay 15-20 ° C, miraha ayaa Giriig ah toddobaadkii.
Waxaa fiican inaad abuurto xididdo marka heerkulka ciidda ee qoto dheer oo ah 6 cm waxay ka sarreysaa 7-8 ° C. Caleemaha ma taagna dhaxan.
Beetleed ma jecla biyo-qaboojinta, oo ay ku jiraan Beelo F1 ah. Isla mar ahaantaana, geedo yar yar ma jecla markii ay ciidda ka baxdo. Waraabinta waa lagama maarmaan, iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada, xagaaga qallalan waxaa jiri kara 5-6 waraabiyo. Hal bil ka hor goynta, waraabinta xididdo joogsato.
Qaybaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay:
Ka dib markii khafiifinta geedo, xididdo waxaa la bacrimiyey Bacriminta macdanta (leh nitrogen), ka dib markii la xiro dushooda, Bacriminta potash-fosfooraska waxaa lagu dabaqaa iyada oo aan la isticmaalin nitrogen.
Maqnaanshaha Bacriminta macdanta kakan ee adag, ash waxaa laga dalbadaa ciidda.taas oo ah pre-qasay leh compost. 1m2 Goobta - 3 koob oo ash ah.
Waa muhiim! Ha ku xadgubin Bacriminta nitrogen, iyaga ka dhig qaybo yaryar si looga fogaado kororka maadada Nitrates ee xididdada.
Tallaabooyinka kale ee daryeelka
Ka dib markii muuqaalka ka mid ah caleemaha ugu horeysay ee xididdo in dhuuban geedo. Inta lagu jiro muddadan, ilaa xidhitaanka of dhaladooda, dhirta u baahan tahay jaridda joogto ah, dabacsan u dhexeeya saf. Waa lagama maarmaan in si taxaddar leh loo daboolo, gaar ahaan marka dalaggu hooseeyo, tan waxaa lagu sameeyaa fargeeto caadi ah oo fudud. Sariiraha dhaadheer leh ee peat ama cawska ayaa yarayn doona qadarka biyaha iyo dabacsanaanta.
Goynta "Boro" waxaa la sameeyaa laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar. Muhiim ma aha in la koro oo kaliya, laakiin sidoo kale si fiican loo goosan karo.
Marka xididdo goosashada, dalagyada xididka ah waa in la burburiyaa majarafad ama baqshiisheed waxayna kor u qaadeen carrada. Ka dib, si tartiib ah u soo jiid khudaarta loogu talagalay dhaladooda ama dooro gacmaha. Isku ururinta fiican ee cimilada qalalan iyo dhaxan, sida xitaa dhaxan yar yar waxay burburin kartaa dushooda dalagyada xididka ah, taasoo ka dhigaysa khudaarta aan ku habooneyn kaydinta. Ka dib marka la ururiyo khudaarta qalalan.
Qaar ka mid ah qawaaniinta qalajinta:
Cimilada kulul ee qalalan, waxay ka wanaagsan tahay in la sifeeyo sariir muddo laba ilaa afar saacadood ah, laakiin mar dambe maahan.
Haddii goosashadu dhacdo cimilada roobaadka ama dalagyada xididka ah ayaa laga goostaa dhulka qoyan, ka dibna way ka fiican tahay in la qalajiyo aagga si fiican u hawo leh, oo uumi goosashada hal lakabka. Muddada qalajinta gudaha gudaha waxay ka socotaa 2-3 maalmood ilaa usbuuc.
Ka dib markii dalagga la qoday oo la qalajiyey hawada, waxaa marka hore la baaraandegay:
Si taxadar leh uga saara dalagyada dalagga xididka dhoobada iyo dhulka.
Iska yaree dushooda, adigoo ka tegaya "dabo" yar ilaa 1 cm oo cabbir ah, inta badan dusha sare ayaa si fudud loo xakameeyaa gacanta, taas oo aan fiicneyn in la sameeyo.
Ka saar xididada dhinaca iyada oo aan waxyeeleynin xididka.
Xiddigga ugu weyn waa la gooyaa waxoogaa yar, taasoo ka dhigeysa ilaa 5-7 cm dheer.
Ka dib markii ay soo saartey ugu horeysay ee dalagga, xididdada waxyeelloobay iyo qashinka ah waa la soo saaraa, oo kaliya xoog iyo kuwa aan weyneyn ayaa loo hayaa kaydinta. Miraha weyn - dheecaan badan, muddo dheer la kariyey oo loo kaydiyey muddo aan dheerayn.
Ka dib markii nadiifinta bilowga ah ee xididdada dhulka xitaa ka caawiyaan kaydinta. Waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo oo kaliya mugdiga dhulka, taas oo dhaawici karta miraha deriska ah., iyo qulqulo badan oo khafiif ah ee ciidda oo la qubey.
Xayeysiinta dukaanka ku yaal qolka madow, tusaale ahaan, madoowyada, dhulka hoostiisa, marar badan balakoonnada iyo qaboojiyaha. Goobta dhismaha, khudradda asaasiga ah waxaa lagu aasay haraaga iyo godadka.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad daawato fiidiyo ku saabsan sida loo kaydiyo xididdo:
Waa muhiim! Waxyaabaha dabiiciga ah ee Boro waxaa lagu kala duwan yahay iyada oo ay u adkeysi weyn u tahay arrimo kala duwan, laakiin waxaa jira suurtogalnimada cudurada qudaarta qaarkood oo ay sababto aashitada sare ee carrada.
Ciladaha macquulka ah ee xididka:
qolof (dildilaaca iyo koritaanka miro);
fomoz (dhibco ku yaal caleemaha);
madow ee saxarka;
Root, "lugta madow" (marxaladda seedling);
Dhammaan kore waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood dhacaan sababtoo ah xaddi badan oo nitrogen ah ama leh qiyaaso badan oo bacarimis ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u bacrimiso ciidda.
Ka hortagga dhibaatooyinka kala duwan
Buunshaha koritaanka ku wareegsan goobta iyo aashitada kordhaysa ee ciidda mararka qaarkood noqdaan jawi raaxo leh oo ku nool deegaankiisa dirxiga ee cayayaanka dabiiciga ah ee macnaheedu yahay khudradda cagaarka ah ee shaandho.
Si loo yareeyo tirada cayayaanka ee cayayaanka, waxaad u baahan tahay si joogto ah:
dooro dirxiga gacanta markaad qoddo;
Isticmaal tuunbiyada tubaakada;
burburin wheatgrass agagaarka goobta;
codso lime carrada.
Haddii ay jiraan caws yar, iyo ciidda si sax ah loo daweeyey guga iyo dayrta, ka dibna weerarka cayayaanka waa la iska ilaalin karaa.
Boro F1 beetroot waa khudaarta cagaarka ah oo cufan leh, midho leh oo joogto ah oo ka soo horjeeda arrimo cilladaysan. Iyada oo agrotechnics xirfad leh, Boro F1 hybrid doonaa hubaal beeraha, kuwaas oo awoodi doona inay siiyaan beero cusub iyo kaydka jiilaalka.
On our website waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad ku saabsan noocyada noocyada noocyada: